Mapisarema 89 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kuimba nezverudo rwaJehovha rusingachinji
Sungano naDhavhidhi (3)
Mwana waDhavhidhi achagara nekusingaperi (4)
Akazodzwa anodana Mwari kuti “Baba” (26)
Sungano yaDhavhidhi ndeyechokwadi (34-37)
Munhu haagoni kupukunyuka Guva (48)
Maskiri.* Rwiyo rwaEtani+ muEzrahi. 89 Ndichaimba nekusingaperi pamusoro pekuratidza kunoita Jehovha rudo rusingachinji. Nemuromo wangu ndichazivisa zvizvarwa zvese kutendeka kwenyu. 2 Nekuti ndakati: “Rudo rusingachinji ruchavakwa* nekusingaperi,+Uye makasimbisa kutendeka kwenyu kumatenga.” 3 “Ndakaita sungano newandakasarudza;+Ndakapikira mushumiri wangu Dhavhidhi ndichiti:+ 4 ‘Ndichasimbisa kwazvo mwana*+ wako nekusingaperi,Uye ndichavaka chigaro chako cheumambo kwezvizvarwa nezvizvarwa.’”+ (Sera) 5 Matenga anorumbidza mabasa enyu anoshamisa, haiwa Jehovha,Chokwadi, anorumbidza kutendeka kwenyu muungano yevatsvene. 6 Nekuti ndiani ari kumatenga angaenzaniswa naJehovha?+ Ndiani akaita saJehovha pakati pevanakomana vaMwari?+ 7 Mwari anotyiwa neungano yevatsvene;+Mukuru uye anoshamisa kune vese vakamupoteredza.+ 8 Haiwa Jehovha Mwari wemauto,Ndiani ane simba semi, haiwa Jah?+ Kutendeka kwenyu kwakakupoteredzai.+ 9 Munotonga gungwa riri kuviruka;+Mafungu aro paanosimuka nesimba, munoadzikamisa.+ 10 Makakunda Rahabhi,+ akaita semunhu aurayiwa.+ Makaparadzira vavengi venyu neruoko rwenyu rune simba.+ 11 Matenga ndeenyu, uye pasi ndepenyu;+Ndimi makaita nyika nezvakazara pairi.+ 12 Ndimi makasika kuchamhembe nekumaodzanyemba;Tabhori+ neHemoni+ zvinorumbidza zita renyu zvichifara. 13 Ruoko rwenyu rune simba guru;+Ruoko rwenyu rwakasimba;+Ruoko rwenyu rwerudyi runokudzwa.+ 14 Kururama uye kutonga zvakarurama ndizvo nheyo dzechigaro chenyu cheumambo;+Rudo rusingachinji uye kutendeka zvinomira pamberi penyu.+ 15 Vanofara vanhu vanoziva kupembera nemufaro.+ Haiwa Jehovha, vanofamba muchiedza chechiso chenyu. 16 Vanoswera vachipembera muzita renyu,Uye vanokwidziridzwa mukururama kwenyu. 17 Nekuti ndimi kukudzwa kwesimba ravo,+Uye kutifarira kwenyu kunokwidziridza simba redu.*+ 18 Nekuti nhoo yedu ndeyaJehovha,Mambo wedu ndeweMutsvene waIsraeri.+ 19 Panguva iyoyo makataura muchiratidzo kuvanhu venyu vakavimbika muchiti: “Ndakapa munhu ane simba guru, simba raainaro;+Ndakakwidziridza munhu wandakasarudza pakati pevanhu.+ 20 Ndakawana mushumiri wangu Dhavhidhi;+Ndakamuzodza nemafuta angu matsvene.+ 21 Ruoko rwangu ruchamutsigira,+Uye ruoko rwangu ruchamusimbisa. 22 Hapana muvengi achamubvisisa mutero,Uye hapana munhu asina kururama achamudzvinyirira.+ 23 Ndichapwanya-pwanya mhandu dzake pamberi pake+Uye ndichauraya vaya vanomuvenga.+ 24 Kutendeka kwangu nerudo rwangu rusingachinji zvinaye,+Uye simba rake richakwidziridzwa* muzita rangu. 25 Ndichaisa ruoko rwake* pamusoro pegungwaUye ruoko rwake rwerudyi pamusoro penzizi.+ 26 Achashevedzera kwandiri achiti: ‘Ndimi Baba vangu,Mwari wangu neDombo reruponeso rwangu.’+ 27 Uye ndichaita kuti ave dangwe,+Ave pamusoro pemadzimambo ese epanyika.+ 28 Kusvikira nariini, ndicharamba ndichimuratidza rudo rwangu rusingachinji,+Uye sungano yangu naye haizomboperi.+ 29 Ndichasimbisa mwana* wake nekusingaperi,Ndoita kuti chigaro chake cheumambo chirambe chiripo sematenga.+ 30 Kana vanakomana vake vakasiya mutemo wanguVorega kufamba maererano nemitongo* yangu, 31 Kana vakatyora mirau yanguUye vakasachengeta mirayiro yangu, 32 Ndichabva ndavarova neshamhu ndichivarangira kusateerera* kwavo+Uye ndichavazvambura pamusana pekukanganisa kwavo. 33 Asi handizoregi kumuratidza rudo rwangu rusingachinji+Kana kurega kuita zvandakavimbisa.* 34 Handizotyori sungano yangu+Kana kuchinja zvakataurwa nemiromo yangu.+ 35 Ndakapika kamwe chete muutsvene hwangu;Handizotauri nhema kuna Dhavhidhi.+ 36 Mwana* wake acharamba aripo nekusingaperi;+Chigaro chake chicharamba chiripo sezuva pamberi pangu.+ 37 Chichasimbiswa nekusingaperi semwedzi,Sechapupu chakatendeka chiri kudenga.” (Sera) 38 Asi imi makamurasa uye makamuramba;+Makashatirirwa muzodziwa wenyu. 39 Makaramba sungano yamakaita nemushumiri wenyu;Makasvibisa korona yake nekuikanda pasi. 40 Makaputsa madziro ake ese ematombo;*Makaita kuti masvingo ake ave matongo. 41 Vese vanopfuura nemunzira vakapamba zvinhu zvake;Ava kuzvidzwa nevavakidzani vake.+ 42 Makaita kuti mhandu dzake dzikunde;*+Makaita kuti vavengi vake vese vafare. 43 Makadzosawo bakatwa rake,Uye makaita kuti akundwe muhondo. 44 Makagumisa kubwinya kwake,Uye makakanda pasi chigaro chake cheumambo. 45 Makatapudza mazuva eudiki hwake;Makamupfekedza nyadzi. (Sera) 46 Haiwa Jehovha, mucharamba makahwanda kusvikira riini? Nekusingaperi here?+ Hasha dzenyu dzicharamba dzichibvira semoto here? 47 Yeukai kuti upenyu hwangu hupfupi zvakadii!+ Makasika vanhu vese musina chinangwa here? 48 Ndiani munhu angararama asingazooni rufu?+ Anogona kuzviponesa* pasimba reGuva* here? (Sera) 49 Haiwa Jehovha, mabasa enyu erudo rusingachinji amaimboita ari kupi,Amakapika nezvawo kuna Dhavhidhi mukutendeka kwenyu?+ 50 Haiwa Jehovha, yeukai kuzvidzwa kuri kuitwa vashumiri venyu;Kutakura kwandiri kufanira kuita* kuzvidza kwemarudzi ese; 51 Kutuka kwakaita vavengi venyu, haiwa Jehovha;Kutuka kwavaiita pese paitsikwa nemuzodziwa wenyu. 52 Jehovha ngaarumbidzwe nekusingaperi. Ameni, Ameni.+
^ Kana kuti “rucharamba ruripo.”
^ ChiHeb., “nyanga yedu.”
^ ChiHeb., “nyanga yake ichakwidziridzwa.”
^ Kana kuti “Ndichaita kuti ave nesimba.”
^ Kana kuti “kupanduka.”
^ ChiHeb., “Kana kukundikana pakutendeka kwangu.”
^ Kana kuti “dzimba dzake dzese dzematombo.”
^ ChiHeb., “Makasimudza ruoko rwerudyi rwemhandu dzake.”
^ ChiHeb., “paruoko rweSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ ChiHeb., “kuita muchipfuva changu.”